Amantombazana athanda amakati, izinja, i-hamsters kunye nezinye izilwanyana. Kodwa abantu abaselula abahlali behlala bevakalelwa ngale ndlela. Ngoko ke kunokuba nzima kakhulu ukukholisa umntu ukuba abe nento ephilayo endlwini. Kodwa, ukuba ufuna ngokwenene ukuba nekati okanye inja, kufuneka uyenze ntoni? Indlela yokukholisa umntu ukuba aqale isilwanyana, ukuba nje akayithandi?
Ukuze uvuselele umfana ukuba aqale isilwanyana, kuyimfuneko ukuyiqonda: ukunyaniseka kwakhe kuxoxwa ngokungafaniyo nezilwanyana okanye ngenxa yezi zizathu. Buza umfana ukuba yintoni kanye inkabi ephazamisayo kwaye imcele ukuba ikunike impendulo ecacileyo necacileyo. Ngokuxhomekeke kwizinto azithethayo, unokwenza izicwangciso zokumkholisa ukuba athole isilwanyana oyifunayo.
Izizathu kunye nezinketho zingafakwa. Iyona nto ibhalwa ngayo - umfana uhlaselwa. Le ngxaki iba yintoni isizathu sokuba umntu afune ukuba nesilwanyana ekhaya. Kodwa kusekho umntu osemncinci onokuqiniseka. Kufuneka nje ukhethe isilwanyana esiza kusinda, nangona sisifo. Uninzi lwamaxesha amaninzi ukuvakalelwa kubangelwa yiboya beekati. Kule meko, unako ukunikela ngohlobo olufana ne-Sphinx. Amakati anjalo angabonakali njengelungileyo njengamaPersi ahlambulukileyo, kodwa angabangeli ukuphendula. Ngokuqinisekileyo, amantombazana amaninzi afana neengxaki, kodwa ufuna ukuba nesilwanyana endlwini yakho ekuthandayo, kodwa indlela ekubukeka ngayo ayibalulekanga.
Esinye isizathu esihle sokuba umfana abe ngumsebenzi wakho. Mhlawumbi akafuni ukuthatha isilwanyana endlwini ngenxa yokuba awuyi kuba nexesha lokuhlambulula nokuhamba emva kwakhe. Ukuba uhlala ushiya, akukho mntu uya kumondla aze amlandele. Kule meko, ukuze umkholise, kufuneka uqinisekise loo mfana ukuba unokuthatha uxanduva ngokupheleleyo kwilwanyana. Kwaye kufuneka ufezekise isithembiso sakho. Ngoko ke, ngaphambi kokuba unikwe ikati okanye inja, gqiba ukuba unokuhlala uhlambulukile, uhamba, ubukele isilwanyana. Ukuba ikati ayilona isilwanyana esinzima, inja iya kuhlupheka. Khumbula ukuba ufanele uvuke kusasa ekuseni uze uhambe inja, kwaye emva komsebenzi, endaweni yokuphumla, uya kufuneka uhambe kwakhona. Iqabane lakho, ngokuqinisekileyo, liyiqonda kakuhle le nto, ke yintoni ephikisana nesilwanyana endlwini yakho. Akafuni ukujongana nayo, kodwa akafuni ukuba isilwanyana sihlupheke. Ngoko ke, ikati okanye inja iya kubonakala kuwe kuphela xa unokumkholisa kwaye ubonise ukuba ungumntu onoxanduva ngokupheleleyo ongeke ashiye isilwanyana ukuze abe nenceba yexesha elizayo. Yaye ukuba uhamba, uhlala unomntu onokunika ixesha lesilwanyana ukuze angabi nosizi, uyondle, uthathe kwaye uhambe. Ukuba uthe wathembisa umama wakho kanye, kodwa ke akazange wenze nto, ungalindelanga ukuba le nombolo iya kudlula nomfana. Abasetyhini banamathele ngakumbi kwizilwanyana, kodwa abantu baninzi. Ngoko ke, ukuba awuhambanga isilwanyana, mhlawumbi, kuya kuba se sitratweni. Ukuze ungabonakali isilwanyana esingenacala ukuba uhlekise, kulungile ukushiya le ngcamango ngokukhawuleza.
Ukuba loo mntu akayithandi nje izilwanyana, ngoko kufuneka uqhubeke ngokusesikweni ukuba abe nomdla kubo. Enyanisweni, nangona kungenazo zonke izilwanyana, kodwa ezinye zazo zihlala zidala uvakalelo luthando kunoma yimuphi umntu. Ukunyamekela ukuba iziphi izilwanyana ezenza ngcono, kwaye uzama ukulungelelanisa ngokukhawuleza ukudibanisa nezilwanyana ezinjalo. Akufuneki ukuba uphathe intaka okanye intshontshi endlwini uze uchaze ngokucacileyo ukuba uya kuhlala nawe. Oku kuya kubakho kwi-scandal, kwaye isilwanyana, mhlawumbi, siya kuba se sitrato. Mthetho ngokuhlakanipha. Xa ufika kubahlobo bakho, gxininisa kwizilwanyana ezifuywayo, zama ukuqiniseka ukuba umfana uthathe ikati ezandleni zakhe okanye wambetha inja. Ukongezelela, mbonise ukuba ungenayo ikati okanye intshontsho ekhaya kwaye uya kuba novuyo xa ebonakala. Ukuba uhamba, njengokungathi uye endleleni, uye kwintengiso yeentaka. Izilwanyana ezincinci zithinta wonke umntu. Ukujonge kubo, thetha malunga nendlela ophupha ngayo, ukuze kubonakale endlwini yakho kwaye kuya kuvuyisa kangakanani. Emva kwexesha, le ntombazana iya kuqala ukucinga malunga nokuba uyaphikisana nokuba nephunga elikhukhulayo endlwini yakho. Oku kunokwenzeka, kuya kuthatha ixesha elincinane kwaye unqume ukukwenza ube mnandi kwaye uya kuvumela isilwanyana ukuba siphile nawe.
Kodwa, ukuba loo mntu usenqaba ngokupheleleyo ukuthatha ikati okanye inja, uzama ukuyicombulula loo nto ngokunciphisa. Kukho ezinye izilwanyana ezinokugcinwa ekhaya, kodwa azidingi unyango olulodwa. Ezi ziquka iigundane, i-hamsters kunye ne-chinchillas. Isilwanyana esinjalo asiyi kukuphazamisa, kodwa uya kuqonda ukuba kukho into ephilayo ekhaya, ithambileyo kwaye ifuthe. Ewe, imouse ayikho ikiti, kodwa inokuqeqeshwa ukuze ikwazi ukubona kuwe inkosikazi nangendlela yakhe yokuthanda. Ukongezelela, ukuhlala ngaphakathi kwindlu kuya kunceda umntu ukuba asebenzise izilwanyana, kwaye ekugqibeleni uya kuvuma isilwanyana owaphuphayo.
Into ephambili akuyikuguqula le ngxaki ibe yimbangela yazo zonke izikhalazo. Ngokuqinisekileyo, ufuna isilwanyana endlwini kwaye unelungelo lakho. Kodwa iqabane lakho linelungelo lokungafuni. Vumelana, ukuba, ngokomzekelo, musa ukuthandwa ngamapulane, kunye nesoka lakho liyakunxusa ukuba ugcine isilwanyana esaphila siphila, uya kulahla. Ngokwemvelo, sinokuthi ikati ayikho ibhet. Kungcono kakhulu kwaye kulungile. Kodwa kumntu, imouse ingaba yilwanyana elithandayo. Yingakho umbono womntu kunye neminqweno kufuneka ihlonipheke. Yaye ukuba loo mntu uyabalalisa ukuqala isilwanyana - sazama ukudibanisa nayo. Ekugqibeleni, ubuhlobo bakho bubaluleke ngaphezu kwekati okanye inja endlini.
Indlela yokugcoba i-jumpsuit yenja
Iibhokhwe zaseGuinea - "iindwendwe" ngaphandle kweendwendwe
Buckwheat ngesibindi kwi-multivark
Iintlobo zeminithi, ukulima kwayo kunye nokusetyenziswa kwamachiza
UFussy umntwana ozithandayo
Inyama yengulube ibhaka kwi-foil
Ukwabelana ngesondo kwindawo yokulala
I-Saladi esuka kwi-curgettes ebusika: zokupheka okumnandi
Ukulahleka kokunciphisa umzimba ngoncedo lokutya kwenyama
Umsebenzi wakho okanye intombi?
I-cream anti-wrinkle ekhangelelene kwamehlo: yintoni na?
ULarisa Kopenkina weza ku "Dom-2" kunye neprokhor Shalyapin waza wahlabelela, ividiyo
I-Mononucleosis: Iimpawu kunye neNyango